Rohde Lorcaserin HCL Pulver (846589-98-8) Hersteller - Phcoker
Roahina Lorcaserin HCL poopy (846589-98-8)
Row Lorcaserin hydrochloride poop is a serotonin 2C (5-HT2C) agonist receptor and medically administered medication that promotes ....
fahafahana: 1380kg / volana
SKU: 846589-98-8 Sokajy: Weight Loss
Rohila Lorcaserin HCL poopy (846589-98-8) video
Rohila Lorcaserin HCL poids (846589-98-8) Specifications
Product Name Roof Lorcaserin Hydrochloride poids
Anarana simika Raw Lorcaserin HCL poopy, mpivarotra
Drug Class 5-HT2C mpandrindra ny receptor
CAS Number 846589-98-8
molekiolan'ny Formula C11H15Cl2N
molekiolan'ny Wvalo 232.15
Monoisotopic Mass 231.058154899
mitsonika Point Tsy misy angona azo atao
Freezing Point Tsy misy angona azo atao
Ny antsasaky ny biolojia Ny antsasaky ny lorcaserin ora dia manodidina ny ora 11.Loarcaserinerin dia foanana amin'ny alàlan'ny urine (92%) ary amin'ny fefy (2.2%)
Solubility Fahamendrehan'ny rano: 0.0709 mg / mL
Storage Temperature -20 ° C.
Application Serotonin 2C (HT2C) agonist receptor ho an'ny fatiantoka mavesatra. Manamaivana ny fihinanana sakafo ary mampivoatra ny fahantrana amin'ny ankapobeny
Raw Lorcaserin Hcl poids (846589-98-8) Description
Ny vilany vita amin'ny hydrochloride roahin-davenona dia ny hydrochloride izay azo avy amin'ny fihetsik'ilay poezia lorcaserin miaraka amin'ny mitovy amin'ny saline saline. Nampiasaina ho zava-mahadomelina manohitra ny fiterahana. Ny hydrochloride mpikaroka dia manefa ny 5HT2c agonista mpandaha-teny izay ampiasaina amin'ny olon-dehibe amin'ny BMI ≥30, na ny BMI ≥27 ary farafahakeliny ny fepetra mifandraika amin'ny lanjany toy ny hypertension, karazana diabeta 2 na dyslipidemia.Lorcaserin Hydrochloride vovoka dia manakana ny fialana sy dia miteraka fahatsapana fientanentanana, ary heverina fa hisoroka ny fiterahana ny valin'ny fitsaboana amin'ny fiterahana noho ny fampidirana ireo mpikatroka 5-HT2B, ny faritra ao amin'ny atidoha dia fantatra fa manana andraikitra lehibe amin'ny fametrahana ny hanoanana sy ny sakafo. Amin'ny fampihetsik'ireo mpanemotra ireo dia mety hampihena ny fanjifana ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fihenan-tsakafo ny Lorcaserin hydrochloride ary hahatonga ny olona hahatsapa na dia aorian'ny fihinanana sakafo tsy mahazatra aza. dia nankatoavin'ny FDA amin'izao fotoana izao amin'ny fanapaha-kevitra marim-pototra taorian'ny fanadihadiana 2 taona.
Ny hodi-jiro hodi-koditra lozika dia voatondro manokana ho fampihenana ny kaloria sy ny fampitomboana ny fikarakarana ara-pahasalamana amin'ny fitantanana manara-penitra amin'ny olon-dehibe matavy loatra (BMI amin'ny 30 kg / m2 na ambony) ary olon-dehibe be loatra (BMI amin'ny 27 kg / m2 na mihoatra) ary farafahakeliny iray mavesatra mifandray amin'ny lanjany.
Ny vovo-dronono vita amin'ny solika dia ampiasaina miaraka amin'ny sakafo ary mampihatra ny fitsaboana. Indraindray dia ampiasaina amin'ny fikarakarana ny atody izay mety mifandray amin'ny diabeta, ny kolesterola avo, na ny tosidra ambony.
Ny hydrochloride ao Lorcaserin dia tsy hanaraka ny fahasalaman'ny aretina (toy ny aretim-po, diabeta, tosidra ambony). Tazony foana ny fanafody rehetra naroson'ny dokotera aminao.
Lozan-dry Hcl poids (846589-98-8) Mechanism of Action
Na dia tsy fantatra aza ny mekanisma, dia heverina ny fampidirana ny mpikirakira 5-HT2C ao amin'ny neurons neurons pro-opiomelanocortin ao amin'ny bakteria boribory amin'ny hypothalamus. Izany dia miteraka fihenan-tsakafo sy fihenam-bidy amin'ny fampiroboroboana ny famotsorana ny hormone alpha-melanocortina izay mihetsika amin'ny receptors melanocortin-4.
Ny volo hydrochloride vita amin'ny pilôtika dia miasa amin'ny fitantanana ny fiankinan-doha - indrindra amin'ny fanentanana ny mpandray ny atidoha ho an'ny serotonin, ny mpitsabo amin'ny neurotransa izay mampihetsi-po ny fahatsapana sy ny fahafaham-po. Ny fitsaboana ny sakafo dia tarihin'ny foibem-pahasalamana, ao amin'ny ivon'ny ventromedial ny hypothalamus sy ny foibem-pahanginana aty amin'ny hypothalamus lateral. Samy hafa ny fidirana amin'ny toeram-pitsaboana ambony sy ny tsipika momba ny gastrointestinal amin'ny ati-doha mikraoba, izay ahitana karazana neurons roa mifehy ny tsimok'aretina. Voalohany indrindra, ny voka-dratsin'ny sakafo entina hampitombo ny proteinina sy ny neuropeptide Y; Ary faharoa, ny vaksin-tsakafo entina mitoka-kôkainina sy amphetamine mifehy ny transcript (CART) sy ny neurons pro-opiomelanocortin (POMC). Ny POMC dia misy mpanolo-tsaina 5-HT 2C, izay rehefa mamoaka ny hormone alpha-melanocyte (alfa-MSH). Ny neuron-n'ny hemôpôticulus sy ny stimulatory fanampiny dia mbola manatontosa ny paraventricular nucleus ao amin'ny hypothalamus. Ny paraventricular nucleus dia manana receptors melanocyte 4 (MC4R) izay manakana ny latsa-paka ao amin'ny dosage therapeutique lorcaserin hydrochloride vovoka dia toy ny 5-HT agonist 2C voafantina ao amin'ny neurons POMC, izay ny antony dia mahatonga ny fanafahana alfa MSH. Ny alfa MSH dia manampy amin'ny MC4R ao amin'ny paraventricular nucleus ao amin'ny hypothalamus, izay miteraka fihenanam-po. Ao amin'ny dosage supratherapeutic, lorcaserin hydrochlorider dia miasa ihany koa amin'ny 5-HT 2B sy 5-HT 2A receptors.
soa ny lambasary Hcl powder (846589-98-8)
Ny lasopy hoditra HCL dia sariohatra 5-HT2C, izay heverina fa hampihena ny tsimok'aretina amin'ny rafitra POMC. Lozisialy HCL ho an'ny poofa:
Ny lasopy hoditra HCL dia ampiasaina miaraka amin'ny fihinanana sy fanatanjahan-tena amin'ny fikarakarana ny vatana.
Indraindray dia ampiasain'ny voankazo hodi-kafe HCL ny fiheverana ny atody izay mety mifandray amin'ny diabeta, ny kolesterola avo, na ny tosidra ambony.
Ny poezan'ny HCC tsy manara-penitra dia tsy hanaraka ny fahasalamany (toy ny aretim-po, diabeta, tosidra ambony).
Recommended Lorcaserin Hcl poids (846589-98-8) Dosage
Ny lasopy torapasika HCL dia tonga amin'ny tablette ary dia raisina amin'ny ankapobeny 1-2 isan'andro, miaraka na tsy misy sakafo. Ny mpivady tsy maintsy ampiasaina miaraka amin'ny fihinanana kaloria fadimbolana sy ny drafitra fanatanjahan-tena.
Ny dosie nomena ny lorcaserin hcl vovoka dia 10 mg nalain'ny vavany indroa isan'andro. Ny mpivarotra dia azo alaina tsy misy fihinanana sakafo. Tokony hajanona amin'ny marary izay tsy mahatratra farafahakeliny 5% isan-kerinandro ny vidim-panafody mandritra ny herinandro 12 satria tsy mahatsapa ny fahavoan'ny lanjany amin'ny fitsaboana mitohy.
Side effects ny lambasary Hcl powder (846589-98-8)
Ny lasam-pandaminana Hcl dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fitantanam-pitandremana manara-penitra amin'ny olon-dehibe manana endri-body (BMI) an'ny 30 na bebe kokoa (obese) ho fanampin'ny sakafo fihinan'ny kaloria sy fampiharana. Azo ekena ihany koa ny fampiasana olon-dehibe amin'ny BMI amin'ny 27 na mihoatra (be loatra) ary misy farafahakeliny ny fepetra mifandray amin'ny lanjany, toy ny fitsaboana goavana (hypertension), na ny kolesterol avo (dyslipidemia). Na izany aza dia mety misy fiantraikany hafa koa izany. Araka ny ambany:
▲ TNy vokany mahazatra indrindra:
- Ny vavanao,
- Fanamafisana, ary
-Hypoglycemia (siramamy ambany).
▲ Ny tsy fahita matetika, fa ny fiantraikany ratsy amin'ny lorcaserin dia:
- Fiovana na fitadidiana,
Ny olana ara-
-Depression na hevitra momba ny famonoan-tena,
- Fo ny fo,
- Mandatsaka ny isa azo avy amin'ny ra, ary
- Fitomboan'ny hormone, prolactine.
FDA no nankasitraka ny HCC ho an'ny fitsaboana ny fiterahana
Ny fiarovana ny kanseran'ny tsiranoka amin'ny marary an-tery na ny marary, Ny New England Journal of Medicine, 2018
Ny fitantanana sakafo sy ny fanafody, ny fitsaboana mikendry ny fanaraha-maso ny fitiliana lava, Online, Published 17 Jolay 2012
Ashley Gustafson, Cammile King, Jose AR, National Center for Information Biotechnology, PMC Articles, MediMedia, Etazonia Lorcaserin, Online, September 2013
Rano Tiptin Rano (66981-73-5)
Ny poety Tianeptine dia tsy mitongilana ary ny mpanohitra amin'ny fanoherana ny selotonine dia mampitombo ny fihenan-tsakafo (SSRE). Amin'ny ankapobeny dia ao ......
fahafahana: 1190kg / volana
Rano Synephrine tartrate (16589-24-5)
Syndrina tartrate roapolo; 1- (4-hydroxyphenyl) -2- (methylamino) ethanol tartrate Details Synonyms 1- (4-hydroxyphenyl) ...... ..
fahafahana: 1358kg / volana
Rano Synephrine HCL vovoka (5985-28-4)
Synephrine HCL dia vongan-toaka voajanahary mahazatra nahitana zavamaniry ary voatokana ho ampiasaina ho fanampiana ...... ..
fahafahana: 1450kg / volana
Roahina 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) poids (13803-74-2)
Ny Rohan 1.3-dimethyl-pentylamine hydrochloride (DMAA) poède dia .......
fahafahana: 12400kg / volana